Homeसमाचारसावधान ! यस्ता लक्षण देखिए मस्तिष्कघात हुन सक्छ (भिडियो हे’र्नुहोस)
April 1, 2021 admin समाचार 3179
काठमाडौंका ५५ वर्षीय सुशील पन्त ¬(नाम परिवर्तन) को ए’क्कासी देब्रेप’ट्टिको हातखुट्टा चलेन । मुख बाङ्गो भएर बोली पनि लरबरिन थाल्यो । एमआरआई गरेर हेर्दा उनको दिमा’गको ठुलो नसाको थोरै भाग बन्द भएको थियो । उनी बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्प’तालमा पुगेको ८० मिनेटमा ‘न्यूरो इन्टरभेन्सन’ प्रविधिबाट उपचार गरेपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । हात, खुट्टा, मुख बाङ्गो भएर लरब’राएको बोली पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियो ।
धेरै मानिसलाई मस्तिष्क’घात भएपछि टाउकोको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यस्तो समस्या भएपछि त’त्काल अस्पताल पुगेमा छोटो समयमै न्यूरो इन्टरभेन्स&नमार्फत उपचार हुन्छ । मस्तिष्कघात भएर दिमागको मोटो नसा बन्द भएमा कुनै पनि औषधिले राम्रो नतिजा नदिने बाँसबा’रीस्थित न्यूरो अस्पतालका न्यूरोलोजिष्ट डा.सुवास प्याकुरेल बताउँछन् ।
मस्तिष्कघात भएका ५५ वर्षीय व्यक्तिको टाउकोको शल्य’क्रिया नै नगरिकन खुट्टाबाट तार टाउकोमै पुर्‍याएर ‘थ्रमेकटोनी’ अर्थात् बन्द भएको नसा:लाई खोलेर उपचार गरिएको उनले सुनाए । मस्तिष्कको नसा च्यातिँदा र बन्द हुँदा नेपालमा टाउकोको शल्य:क्रिया गरिन्छ । यस्तै, मस्तिष्कघात हुँदा रगत पातलो बनाउने औषधि बिरामीलाई दिइने भए पनि पूर्ण रुपमा निको नहुने डा. प्याकुरेल बताउँछन् । तर नयाँ प्रविधिबाट उपचार गरेर बिरा’मीमा जीवनभर हुने प्यारा’लाइसिसबाट बचाउन सकिने उनले बताए ।
दिमागको नसा बन्द हुनुलाई मस्ति’ष्क घात भनिन्छ । दिमागको नसा च्यातिनुलाई ‘ब्रेन हेमरेज’ भनिन्छ । यस्ता समस्याको उपचारका लागि प्रायः टाउकोको श’ल्यक्रिया गरिन्छ । तर शल्यक्रियाबिना नै हात वा खुट्टाको नसाबाट तार लगेर उपचार गर्ने प्रविधिलाई न्यूरो इन्टरभेन्सन भनिने डा.प्याकुरेल बताउँछन् । नेपालमा मस्तिष्कघातसम्बन्धी उपचार गर्ने नयाँ प्रविधि न्यूरो इन्टरभेन्सनबाट टाउकोको शल्य’क्रियाबिना नै बिरामीलाई पूर्वतत् अवस्था’मा फर्काउन सक्ने उनको दावी छ ।
दिमागको नसाको भि’त्तामा बोसो जमेर पनि नसा बन्द हुनसक्छ । जुनसुकै कारणले दिमागको नसा बन्द भए पनि त्यसलाई खोल्ने प्रविधि दुई किसिमको हुन्छ । एउटा प्रविधि हो दिमा’गको नसाको आकारजत्रै एउटा ट्युब लगेर रगतको थेग्लो तानिन्छ । त्यसलाई एक्सप्रेसन प्रविधि भनिन्छ । यस्तै, झिल्ली’जस्तो जालीलाई बन्द भएको नसामा लगेर रगतको थेग्लो वा बोसोलाई समातेर बाहिर निकाल्ने गरिन्छ । त्यसलाई स्ट्रेन रिट्टेबल भनिन्छ । विगतमा मस्तिष्कमा जमे’को रगतको थेग्लोलाई पगाल्न विभिन्न औषधि दिइन्थ्यो । सन् २०१५ को क्लिनिकल ट्रायलमा दिमागको कुनै पनि मोटो नसा बन्द भयो भने रगत पगाल्ने औषधिले राम्रो नतिजा नदे’खाएको डा. प्याकुरेलले बताए ।
नयाँ प्रवि’धि ल्याएपछि न्यूरो अस्पतालले मस्तिष्कघात भएका ७५ जना र ब्रेन हेमरेज भएका ८० जनाको सफल’तापूर्वक उपचार गरेको उनले सुनाए । उनका अनुसार नेपालमा न्यूरो इन्टरभेन्सन गर्नका लागि बाइप्लेन डिएसए प्रवि’धि न्यूरो अस्पताल बासँबारीमा मात्रै छ । न्यूरो इन्टरभेन्सन नेपालमा भर्खरै आएको प्रविधि हो । ‘पित्त थैली पत्थरीका लागि पहिला शल्यक्रिया गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले प्रविधिको विकास भएपछि बिरामीलाई सहज होस् भनेर पेट नचि’रिकन प्वाल पारेर ल्याप्रोस्कोपीबाट गरिन्छ ।’
बिरामीलाई स’मस्या नहोस् भनेर चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ प्रविधिहरुको विकास भइरहने उनले बताए । उनले भने, ‘मस्तिष्कघात हुँदा टाउकोको चिरफार गर्न पर्दैन, ठुलो घाउ नबना’इकन आइसियूमा धेरै लामो समयसम्म बिरामीलाई नराखिकन, खुट्टाको नसामा दुई एमएम सानो प्वाल बनाएर त्यसकै माध्यमबाट नसाको अप्रेशन गर्न सकिन्छ ।’नेपालमा न्यूरो इन्टरभेन्सनमार्फत उपचार गरिए’कामध्ये ९० सफल भएको उनले सुनाए । रातोपाटीबाट
March 4, 2021 admin समाचार 3268
December 29, 2020 admin समाचार 4877
February 11, 2021 admin समाचार 3593